Ibiza - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia
I Ibiza dia iray amin'ireo nosy dimy ao amin'ny vondronosy Balearic izay mandray ny ankamaroan'ny mpizahatany isan-taona. Ary tsy natao ho an'ny kely kokoa: ny morontsiraka kristaly, ny fiainany amin'ny alina, ary ireo hetsika marobe atolotray ny mpitsidika azy dia tsy isalasalana fa tena manintona. Ankoatr'izay, ny toetrandro dia malefaka mandritra ny taona, izay midika fa, na dia ilaina aza ny miaro kely ny tenanao amin'ny ririnina, dia tena maniry ny hamakivaky ny arabeny.
Izay te-hankany amin'ity toerana mahafinaritra ity dia hahita paradisa, sahala amin'ny hoe tsy nofinofisiny. Misy zoro mahafinaritra erak'izao tontolo izao, saingy i Ibiza dia iray amin'ireo nosy tsara vintana, miaraka amin'ny rano izay mifaninana amin'ny hatsarana sy ny zava-boary miaraka amin'ireo any amin'ny Ranomasina Karaiba.
Mila manampy an'io isika la sakafo matsiro an-trano izay voaomana amin'ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana isan-karazany tena sarobidy amin'ireo mpampiasa TripAdvisor. Aza misalasala manandrana ny lasopy tongolo Ibizan na ny saosy tantsaha nentim-paharazana, ity farany niomana indrindra amin'ny fety manokana, toy ny Krismasy.
Ka inona no andrasanao hitsidika an'i Ibiza? Eto ianao dia ho afaka hahita ny fampahalalana rehetra ka hanana dia tsy hay hadinoina. Aza adino izany.
ny Susana Garcia hace 8 volana .
I Ibiza dia nosy iray an'ny Nosy Balearic ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo malaza indrindra. Misongadina ...
ny Maria hace Taona 1 .
Voahodidin'ny natiora amin'ny tontolo zara raha tanàn-dehibe, hita i Cala Salada, iray amin'ireo lava-pifandraisana tsara indrindra sy be mpitsidika indrindra ...
ny Mariela Carril hace Taona 1 .
I Ibiza dia iray amin'ireo nosy Balearic fantatra amin'ny maha iray amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe any Eropa ...
ny Susana Garcia hace 2 taona .
Ny tanànan'i San Antonio, fantatra ihany koa amin'ny hoe San Antonio Abad na Sant Antony de Portmany. Ity tanànan'ny Ibiza ...
ny Maria hace 3 taona .
ny Carmen Guillen hace 4 taona .
Fantatsika rehetra fa arakaraka ny fiandrasantsika ela ny hanaovana ny famandrihantsika amin'ny fialantsasatry ny fahavaratra no mahalasa lafo azy kokoa, ...
ny Susana Garcia hace 5 taona .
I Ibiza dia nosy iray malaza amin'ny fety fahavaratra, ny clubclub goavana ary ny fiainam-piankohonana, fa ity nosy ...
ny Morontsiraka sy ny Resorts hace 8 taona .
I Ibiza dia iray amin'ny toeran-kaleha lehibe indrindra eto an-tany, izay andehanan'ny andro amin'ny iray amin'ireo ...
Na dia tsy maintsy ekena aza fa tora-pasika nudist misokatra ho an'ny besinimaro rehetra, ny marina dia ...
Nosy Hvar, Ibiza any Kroasia.
ny eTraveling hace 10 taona .
Heverin'ny magazine 'Forbes' ho iray amin'ireo nosy mahaliana indrindra, miaraka amin'i Hawaii sy Bahamas, ilay nosy ...